China English Myanmar
Myanmar Mandalay Website သည် အိမ်၊ ခြံ၊ မြေအကျိုးဆောင်လုပ်ငန်းအဖြစ် မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံးရဲ့ မြို့နယ်များအလိုက် အိမ်၊ခြံ၊မြေ အရောင်း၊အဝယ်၊အငှါးစာရင်းတွေကို Website ပေါ် စုစည်းပေးထားပါတယ်။ ဒါတွေအပြင် အိမ်၊ခြံ၊မြေ အရောင်း၊အဝယ်၊အငှါးစာရင်းများအား Update စစ်ဆေးတာမို့ စိတ်ချလက်ချနဲ့ အိမ်၊ခြံ၊မြေတွေကို ဆက်သွယ်ဝယ်ယူ၊ငှါးရမ်းနိုင်ပါပြီ။ သင့်ရဲ့ အိမ်၊ခြံ၊မြေတွေကို ရောင်းမှာလား၊ ငှါးမှာလား ဒါတွေကို Myanmar Mandalay.Com မှာ အခမဲ့ကြော်ငြာနိုင်ပါပြီ။ Website ထဲဝင်လိုက်တာနဲ့ တစ်နေရာတည်းမှာ ရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်ပါတယ်။ အဆိုပါ ရောင်းမည်နှင့် ငှါးရန်းရှိတဲ့ အိမ်ရာတွေကိုပါ Myanmar Mandalay မှာ လွယ်ကူစွာရှာဖွေနိုင်ပါတယ်။
မြန်မာ့အိမ်၊ခြံ၊မြေသတင်းအသစ်တွေကိုလည်း Website ကနေဖော်ပြပေးနေတဲ့အပြင် နောက်ဆုံးပေါ် အိမ်၊ခြံ၊မြေသတင်းတွေကို Click တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ရုံနဲ့ ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။
အဓိကကတော့ အိမ်ရှာနေတဲ့သူဖြစ်ဖြစ်၊ အိမ်ရောင်းချင်တဲ့သူ ဒါမှမဟုတ် အိမ်ငှါးချင်တဲ့သူ ဘယ်သူမဆို Myanmar Mandalay Website ကို အသုံးပြုကြဖို့နဲ့ လိုအပ်နေသည်များကို သိရှိနိုင်ဖို့ အခုပဲ စတင်သုံးကြည့်လိုက်ပါ။ မြန်မာ့အိမ်၊ခြံ၊မြေအကြောင်းအရာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အကြံဉာဏ်တစ်ချို့ လိုအပ်ပါသလား? ဒါတွေကို ကူညီဖို့ Myanmar Mandalay က အသင့်ရှိနေပါတယ်။ ဖုန်းခေါ်၍ဖြစ်စေ၊ E-mailကနေ တစ်ဆင့်ဖြစ်စေ ပေးပို့ပြီး လိုအပ်ချက်တွေကို အကြံဉာဏ်တောင်းဆိုနိုင်ပါတယ်။ တကယ်လို့ သင့်အနေနဲ့ အိမ်၊ခြံ၊မြေအကျိုးတူလုပ်ငန်းတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သိချင်တယ်ဆိုရင်တော့ Myanmar Mandalay ရုံးကိုလာရောက်ဖို့ ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်။
မိတ်ဆွေ၏ အိမ်၊ခြံ၊မြေတွေကို Website မှာတင်ချင်ပါသလား? (သို့မဟုတ်) အခွန်ကိစ္စ၊ မိတ်ဆွေ၏ ပိုင်ဆိုင်မှုများကို မှတ်ပုံတင်ဖို့ ကိစ္စနဲ့ စာချုပ်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ အချက်အလက်တွေကို သိလိုပါက Myanmar Mandalay ကို ချက်ချင်း ဖုန်းခေါ်ဆိုလိုက်ပါ။ Myanmar Mandalay Website, Facebook Page နဲ့ ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုအနေတဆင့် ဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်။ Myanmar Mandalay.Comအကြောင်း၊ ရုံးနဲ့ လမ်းညွှန်ချက်တွေကို ဝင်ရောက်လေ့လာနိုင်ပါတယ်။
Myanmar Mandalay မိသားစုမှ ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါသည်။
Za-25/1,North of Mandalay Diary Production, Beside the Yangon-Mandalay RoadIndustrial Zone(1) Pyigyitagon Township Mandalay Division
Ph:09402532713, 09-783134021 FAX: +95-2-5154102
MMRE Company Limited is the myanmar real estate industry website – the best place to start your real estate search whether you are an investor, buying for own use, or looking foraplace to rent.